Home News Marwada MW Farmaajo oo qeyb ka ah boobka canshuurta Gobolka Banadir iyo Farmaajo...
Marwada MW Farmaajo oo qeyb ka ah boobka canshuurta Gobolka Banadir iyo Farmaajo oo difaacayo (Cadeeymo)
Marwada Madaxweynaha Zeynab Macalin Cabdi aya waxaa ay si farsameeysan ula xiratay Agaasimaha Waaxda Canshuuraha ee Wasarradda Maaliyadda Muxyadin Xassan Jurus oo loo yaqaan Saabeey iyo Agaasimaha Wasaaradda Howlaha Guud, Gaadiidka Badda Maxamed Cusmaan Cali oo loo yaqaan Dhagaxtuur.
Asbuuc kastaa oo ka mida 13kii bilood ee la soo dhaafay waxaa Marwa Zeynab Macalin loo keenayay lacago u dhaxeeya $33,000-$48,000. Lacagahaan ayaa waxa laga soo jaraa lacagaha laga soo aruuriyo suuqyadda iyo rugaha gacansiga Gobolka Banaadir.
Fakarka bixinta lacagta aya waxa ay ka timid Ra’iisal Wasaarihii hore Cali Maxamed Geedioo isagana si toos ah looga masruufo canshuurta laga soo qaado deegaanka Gobolka Banadir. Cali Geediayaa u sheegay sida kaliya oo ay labadaa mas’uul ku heysan karaan jagooyinkooda ay tahay in ay Marwada Madaxweynaha la xirtaan, lacago joogta ah u geeyaan. Iyada oo taladaas la taabagalinayo ayaa Marwo Zeynab Macalin waxa loo bilaabay in asbuucii loo geeyo lacago loogu soo sarifay lacagta doolar Mareykanka.
Marwa Zeynab ayaa marka ay safarto waxa ay ku amartay labada mas’uul in ay lacagta asbuuclaha ah ugu dhiibaan ama ay ku wareejiyaan haweeney lagu magacaabo Nasro Weheliyo oo ay ehel yihiin Marwadda Madaxweynaha.
Mas’uuliyiinta Dhagaxtuur iyo Saabeey ayaa waxa ay yihiin labada shaqsi oo aan u baahneyn balan si ay u arkaan Madaxweyne Farmaajo. MW Farmaajo ayaa amar ku bixyay in ay habeen iyo maalin, saacad kastaa oo ay u baahdaan loo soo daayo. labada shaqsi oo aan waligood waxbarasho asaasi ah qaadanin, laakiin ka been abuura aqoontooda aya waxa ay hadda noqdeen labada qof ee arki kara qoyska Madaxweynaha markastaa oo ay u baahdaan marka laga reebo RW Kheyre.
Muxyadiin Saabeeyoo aan qarsanin dareenkiisa aya sheegay in uu ka shaqeeyo siyaasad, wax kastaa oo u suuragalinya in uu sii joogo kurisigiisana uu sameeynayo. Muxyadiin Saabeey ayaa yiri “ Bilcaanta Farmaajo waa og tahay in waqtiga lagu sii jiraayo gugiga Villa Soomaaliya uu kooban, waxana kula talinay in ay lacag meel dhigato oo ayan isku haleeynin MW Farmaajo” Waxa uu intaas ku daray “aniga waxaan sidaan si la mida ah ugu qidmeeyn jiray bilcaamaha madaxdii Farmaajo ka horeeysay, qaarkood lacag iska dhaafee dhul ayaan u iibin jirnay markaas ayaan ku wareejin jirnay”
Mid ka mida mas’uuliyiinta sare ee Wasaaradda Maaliyadda ayaa u sheegay MOL in mas’uuliyiinta ugu sareeysa Wasaaradda ay og yihiin lacagaha uu Muxyadiin Saabeeyka dhaco qasnadda dowladda hadana ma jirto cid talaabo ka qaadi karto. Dhanka kale Agaasime Maxamed Cusmaan Dhagaxtuurayaa isna inta badan ugu dhaarta Wasiiradda la soo magacaabo Wasaaradiisa in ayan ka hadlin hoowlahiisa u gaarka ah. Wasiir horay ula soo shaqeeyay oo ka gaabsay in magaciisa la sheego ayaa yiri “.. Dhagaxtuur waxa uu iigu dhaaran jiray, aniga ayaa Wasaaradda u danbeeyn doono ee ha igu saqajaamin”.
Inkastaoo labadii sano ee la soo dhaafay la badalay inta badan xog’hayayaasha iyo Agaasimayaasha Wasaaraddaha hadana Maxamed Cusmaan Dhagaxtuur iyo Muxyadiin Saabeey waa labada mas’uul oo aan marnaba aan la isku dayin in la badalo. Dhowr mar oo uu Wasiirka Maaliyadda damcay in uu badalo Muxyadiin Saabeey waxaa si toos ah uga hortimid Marwada Madaxweynaha Zeynab Macalin oo uga digtay Wasiir Beyle in uu isku dayo in uu badalo Muxyadiin Saabeey.
Waxaa nasiib xumo ah in Marwada Madaxweynaha Zeynab Macalin Cabdi ay qeyb wayn ku leedahay boobka Hantida Qaranka, gaar ahaan canshuurta laga soo uruuriyo dadka masaakiinta eek u ganacsada magaalada Muqadishu. Waxaa socda baaritaan iyo qoraalo cadeeymo ah oo ay gacanta ku dhigtay MOL kuwaas oo dhawaan lala wadaagi shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleDuqa Muqdisho Oo La Kulmay Ergeyga Qaramada Midoobey U Qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom
Next articleWareegto Kasoo Baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliland Oo Lagu Magacaabay Masuuliyiinta Saddex Gudi
Madaxweynaha iyo R/Wasaarihiisa ma isla Dhacayaan misa waa kala Hormarayaan?